Hassan | Somaliweyn.org	Home
Stories written by Hassan	Kooxda Al-Shabaab oo soo bandhigtay qalab ay ka tageen ciidamadii Maraykanka ee weererka ku qaaday deegano ka tirsan gobolka Shabeelaha hoose (Daawo Sawirro)
Al-Shabaab ayaa baraha internetka ee taageera ku soo bandhigay jir dad iyo qalab yar yar oo ay ka tageen ciidamadi Maraykanka ee shalay waaberigii weeraray degaanka Daarusalaam ee gobolka Sh/hoose. Ciidamada Maraykanka iyo kuwa kumandoska Soomaalida oo watay dayuuradaha helicobterka ah ee loo yaqaano Black Howk ayaa weeraray farisimo Al-shabaab ku leeyihiin degaanka Daresalaam. Saraakiisha […]
Dowlado shisheeye oo Maamulka Puntland ku Wareejiyey rag la sheegay in ay yihiin Burcad-Baddeed
Saddex ruux oo la sheegay in ka tirsanaayeen kooxaha loo yaqaano Burcad-baddeedka oo bishii hore ku fashilantay inay qafaashaan Markab Xamuul ayaa shalay lagu soo wareejiyey Maamulka Puntland. Ciiddanka Badda ee dalalka Shiinaha iyo Hindiy ee ka hawlgala Xeebaha Somalia ayaa gacanta ku dhigay raggan saddaxda ah , xilli ay 8dii bishii hore ee April […]
Farmaajo oo Amar aan la ogeyn sida uu ku hir-galayo Dul Dhigay Madaxda Maamul Goboleedyada dalka
Sida ay inoo xaqiijiyeen ilo lagu kalsoonan karo Madaxweynaha Soomaliya Maxamed C/laahi Maxamed (Farmaajo) ayaa ku amaray madaxda maamul goboleedayda dalka ka jira inay soo Gudbiyaan khudbadaha ay kajeedinayaan shirka Magaalada London 11-ka bishaan ka dhacay si looga saxo oo aysan u baal marin hadafka Dowlada dhexe ee Federaalka Soomaliya. Madaxweynaha ayaa la sheegay in […]
Xaaf iyo Farmaajo oo Xamar ku kulmay iyo qaar ka mid ah Madaxda Maamul-Goboleedyada oo ka dhoofay dalka
Madaxweyaha cusub ee maamulka Galmudug Axmed Geelle Ducaalle Xaaf ayaa Maanta Madaxtooyada kula kulmay Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed. Ugu horeyn Madaxweynaha Soomaaliya ayaa ugu hambalyeeyay Madaxweynaha Galmudug guushii uu ka gaaray doorashadii ka dhacday Magaalada Cadaado. Sidoo kale waxaa ay ka wada hadleen sidii loo wanaajin lahaa xiriirka ka dhaxeeya dowladda Soomaaliya iyo sidoo […]
Madaxweynaha Somalia Farmaajo oo Kormaar ku tagay goobaha lagu keydiyo raashinka ciidanka DFS
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta kormeeray goobaha lagu keydiyo raashinka ciidamada dowladda Soomaaliya ee ku yaala magaalada Muqdisho. Madaxweynaha ayaa kormeer ku sameeyey baqaarada lagu keydiyo raashinka ciidamada dowladda, isagoo dhinaca kalena hubiyey tayada raashinkaasi. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sidoo kale hubinayey in ciidamada dowladda ay helaan ama lasiiyo raashinka ay […]
Donald Trump Madaxweyne Mareykanka oo u tacsi u diray Ehelada Askarigii lagu dilay Soomaaliya
Madaxweynaha dowladda Mareykanka Donald Trump ayaa ka hadlay Askari ka tirsanaa Ciidamada dowladda Mareykanka ee shalay lagu dilay Shabeelaha Hoose. Madaxweynaha ayaa sheegay in Askarigaasi uu dhintay isagoo gudanaya Waajibaadkiisa Qaran. Trump ayaa sidoo kale tacsi u diray Ehelada Dhammaan qoyskii uu kasoo jeeday Askariga la dilay. Waxaa uu wacad ku maray in ay sii […]
Faahfaahin dheeri ah oo ka soo baxeysa Askar Mareykan ah oo khasaare dhimasho iyo dhaawac kala kulamay weerarkii shalay ee Shabeelada hoose
Warbaahinta Maraykanka ayaa saacadihii la soo dhaafay warbixino kala duwan ka qoray askarigii ka tirsanaa ciidamada Maraykanka ee shalay lagu dilay Somalia. Askarigan oo la oran jiray Kyle Milliken ayaa ahaa 38 jir ka tirsanaa ciidamada gaarka ah ee Maraykanka gaar ahaan qeybta Falmouth oo ka tirsan degaanka Maine. Sida uu baahiyey Telefishinka ABC Kyle […]
Dowaldda Somalia iyo Shirkadaha Isgaarsiinta oo shir uga furmay Xamar
Ra’iisul wasaaraha xukumadda federalka Soomaaliya Xasan Cali kheyre ayaa Magaalada Muqdisho ka furay Shirwayne Qaran oo looga arrinsanayey horumarinta isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda dalka. Shirkaan ayaa waxaa soo qaban qaabisay wasaaradda Boostadda iyo Isgaariinta dowladda Soomaaliya , waxaana uu socon doonaa Muddo Saddex maalin ah. Waxa ka qeyb galaya Shirkaan wasiiro ka tirsan dowladda federaalka , xildhibaano , […]
Hanti dhowrka Guud ee Qaranka Dr. Nuur Faarax Jimcaale oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in dilkii xalay ay ilaaladiisa magaalada Muqdisho ugu geesteen Wasiirkii Howlaha Guud iyo Dib u dhiska Xukuumada Soomaaliya Cabaas C/llaahi Sheekh Siraaji in uu ahaa shil dhacay, waxuuna tilmaamay in uu aad uga xun yahay in shilkaasi uu ku dhinto Wasiirka […]
Wafdigii uu Hogaaminayay Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo oo ku maqnaa Wadanka Itoobiya ayaa Hadda soo gaaray Magaalada Muqdisho,waxaana ay ka soo dageen Garoonka Diyaaradaha Magaalada Muqdisho. Madaxweyne Farmaajo ayaa ka qeyb geli doona Aaska Wasiirkii Howlaha Guud ee Xukumadda Soomaaliya oo Xalay ku dhintay Rasaas la sheegay in ay ku fureen Ciidan ka tirsan […]